Somaliland: Beyaan Seeto Adag Ku Xidhay Shirkii Masallaha Ka Dhacay Oo Ay Soo Saareen Guddida Jaangoynta Siyaasadd Iyo Horumarinta Beellaha Ciidagale Ee SAHAN BARWAAQO - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Beyaan Seeto Adag Ku Xidhay Shirkii Masallaha Ka Dhacay Oo Ay...
Beyaan Seeto Adag Ku Xidhay Shirkii Masallaha Ka Dhacay Oo Ay Soo Saareen Guddida Jaangoynta Siyaasadd Iyo Horumarinta Beellaha Ciidagale Ee SAHAN BARWAAQO
Beyaan Xambaarsan War-murtiyeed kooban oo ay caawa soo saareen guddida guud ee horumarinta bulshada iyo jaangoynta siyaasadda u qaabilsan beellaha Daa’uud Ismaaciil (Ciidagale) ee loo yaqaanno SAHAN BARWAAQO ayaa si adag uga hadlay mawqifka ay guddi ahaan ka taagan yihiin in la baal maro xeerarka iyo shuruucda lagu hagayo beesha, kuwaasi oo lagu ansixiyey shirweyne loo dhan yahay horaantii sanadkan.
War-murtiyeedkan oo nuqullo kamid ah loo qeybiyey warbaahinta maxalliga ah waxaa lagu sheegay in ay guddi ahaan masuul uga yihiin beellaha ciidagale wixii wada-hadallo iyo shirar ku saabsan ee ay lala gelayo dhiggooda, kuwaas ooloo cuskan doono shuruucda u degna beesha.
War murtiyeedkaasi oo uu ku saxeexnaa afhayeenka guddida SAHAN Barwaaqo Chief Caaqil Maxamed Cabdillaahi Maxamed waxaa uu u dhignaa sidan:
“ Kaddib shir maanta ay iskugu timid guddida fulinta ee Sahan-Barwaaqo, shirkaasi oo ku taariikhaysnaa [11-7-2016], dood dheer iyo falanqayn waxaanu isla qaadanay.
Wixii shirar ah ama teegeero ah in guddida guud ee Sahan-Barwaaqo qaban karto, sida xeerka guud ee beeshu dhigaayo.
Haddaba, guddida guud ee Sahan-Barwaaqo waxay soojeedinaysaa in la raaco xeerka guud ee beesha Daa’uud Ismaaciil [Ciidagale] kaasi oo ku taariikhaysnaa 11-1-2016.”
Si kastaba ha ahaatee, warkan qoraalka ah ee ay soo saartay Sahan-Barwaaqo ayaa kusoo beegmaya xilli shalay uu Suldaanka Guud Ee beelaha Somaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir uu kasoo horjeestay shir la sheegay in uu dhex-maray beelaha kala dega Koonfurta Hargeysa iyo Galbeedka Burco.